Antsan-tononkalo - Hanolotra kanto hafa kely hoan'ny mpankafy i Raozigasy sy i Anse Etoile
Publié avril 30, 2019 par Book News
Amin’izao fandalovany eto Madagasikara izao dia hanolotra antsan-tononkalo i Raozigasy ny 1 mey ho avy izao, eny amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely. Hiaraka aminy ny mpanakanto Anse Etoile.
Antsan-tononkalo atolotr’i Raozigasy sy Anse Etoile
« Isika roa ». Io no lohahevitra hoentina mandritra ny antsan-tononkalo atao eny amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely ny alarobia 1 May ho avy izao amin’ny roa ora tolakandro. Nosafidiana manokana io lohahevitra io noho ny lafiny maro toy ny fanehoana ny asa soratra amin’ny teny malagasy sy amin’ny teny frantsay. Raha ny amin’ny resaka isa kosa indray dia roa mianadahy ireo hanao ny asa soratra. Anisan’ny antony nifidianana ny lohahevitra ny fisian’ny asa soratra nosoratan’i Raozigasy mitondra ny lohateny hoe « Isika roa ». Ity farany, izay tantaram-pitiavan’olon-droa.
Taorian’ny fipetrahany tany ivelany nandritra ny taona maro dia mandalo eto an-tanindrazana i Raozigasy amin’izao fotoana izao. Noho ny fangatahan’ny maro dia hanolotra ny kantony hoan’ireo mpankafy azy ny tenany amin’ny 1 May izao. Fotoana hampahafantarany ny asa sorany ho an’ny mpankafy haisoratra malagasy. Kanto hafakely no atolony amin’io. Hampiaraka ainga aminy koa i Anse Etoile fa amin’ny teny frantsay kosa no hiantsany izany.
Hisy boky amidy mandritra io fampisehoana miavaka io. Hisy ihany koa vahiny tsy ampoizina hanafana ny fotoana.
Ankoatra izay dia fotoana hanokafana varotra fampirantiana hosodoko ataon’ny Twins’ Gallery koa io fotoana io. Ity farany izay mitohy hatramin’ny faha 4 May izao eny amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely.